कविता अनि कविता र फेरि कविता - Enepalese.com
बसन्त श्रेष्ठ २०७७ चैत २३ गते २३:४५ मा प्रकाशित
साहित्यका बिभिन्न बिद्या मध्ये कविता लेख्न, पढ्न र वाचन गर्न म अति मन पराउछु | मैले कविता बाट नै नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेको हुँ । मलाई कविता लेख्न मन पर्नुको मुख्य कारण हो समयको बचत । छोटो समयमै एउटा कविता कोर्न सकिन्छ । कविता धेरै शक्तिशाली हुन्छ । एउटा कविताले नै थुप्रै कुराहरु व्यक्त गर्ने सामर्थ राख्दछ । कविताको आकार जति सानो हुन्छ त्यसको त्यतिनै प्रभाब र ब्यक्तिने शक्ति प्रबल हुन्छ । त्यसैले म कविता लेख्न रुचाउने गर्दछु |
हालसालै केहि मित्रहरुले आआफ्नो पत्रिकाको लागि रचना माग्नु भयो । मैले आफुलाई सजिलोको लागि हुन्छ एउटा कविता पठाउने विचार गरेको थिएँ । तर मित्रहरुले कविता होइन कुनै लेखको लागि नै अनुरोध गरे । सजिलोको लागि कुनै बिषयमा भए पनि हुन्छ पनि भन्नु भो । सोचें कतै मित्रहरुले कवितालाई उपेक्षित दृष्टिले त हेर्नु भएको त छैन ? कारण थाहा भएन । तर दुवै मित्रले लेख नै माग्नु चैं संयोग थियो या के थियो थाहा भएन । खैर जे कारणले होस् । म एउटा लेख लेख्न शुरु गर्दैछु । तर कुन बिषयमा सोचेको छैन । म कहिलेकाहीं लेख त लेख्ने गर्छु तर जसरि सजिलो र धक फुकाएर कविता कोर्ने गर्छु त्यति सजिलो लाग्दैन लेख लेख्न | ।
आउनोस कविता कै बारेमा केहि चर्चा परिचर्चा गरौँ । कसो हुन्न र ?
हो साहित्यका बिभिन्न बिद्या मध्ये कविता धेरै लेखिने र थोरै पढिने बिद्या नै हो । कविताको दाँजोमा कथा, उपन्यास, संस्मरण अनि यात्रा निबन्ध धेरै बिक्ने पुस्तक हुन् । तर कविताको लोकप्रियता धेरै छ । यो शक्तिशाली पनि छ ।
कविताका शब्दहरुले थुप्रै बिभिन्न अर्थ समेट्न सक्छन । थोरै लेखेर धेरै भन्न सक्ने शक्ति भएको कविता नै हो | थोरै समयमा छोटो कविताले संघर्षको संखनाद गर्न सक्छ |
कविता मनको सुन्दर अभिव्यक्ति हो । कविको भावना लाई जुन कुराले मनन गर्छ त्यसै मार्फत नै कविताको जन्म हुन्छ । कविताको क्षेत्र असीमितछ
। आँशुको होस् या हाँसोको । खुशीको होस् या दु:खको । आफ्नो मनको भावनाको उद्गार नै कविता हो । कविता एउटा पूर्ण एक दर्शन पनि हो । जिन्दगीको बिबिध पक्षलाई उजागर गरेर लेखिएको आफ्नो मन भित्रको उद्गार नै बास्तबमा जीवन्त कविता हो । सम्पूर्ण मानबको जिजीबिषा बारे लेखिएको कविताले नै जीवन्तता प्राप्त गर्दछ । कविताको उत्पति हाम्रो जीवनको उत्पति संगै मानिन्छ । त्यसैले यो आदिम साहित्य पनि हो ।
साहित्यका अरु बिद्या भन्दा कविता धेरै र अति लोकप्रिय मानिन्छ । ठुला ठुला शहरका थुप्रै मेट्रो रेलहरुमा “पोएट्री फर मोसन” भनेर कविताका टुक्रा जताततै लेखिएको हुन्छ । शुभ कामको लागि शुभ कामनाका कार्ड दिनलाई होस् या दु:खका कुरा बाड्न लाई समबेदनाका कार्ड नै किन न होस । या कहीं मन्दिरमा होस, या चिहानमा होस् जहाँ तहीं छोटो मिठो कविताका टुक्राहरुले त्यहाँ आफ्नो भाबना / विचार ब्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । कथा निबन्ध लेख्ने त्यहाँ न त स्थान नै हुन्छ न त त्यहाँ पढ्ने कसैको समय नै हुन्छ । कथा, कहानीले दिने संदेश कविताले एक पन्नामा दिने समर्थ राख्दछ । त्यसैले त कविता / गजल र गीतको लोकप्रियता अति नै धेरै छ । कविता गीत बन्न सक्छ । कथाको अंश बन्न सक्छ र उपन्यासको एक हिस्सा बन्न पनि सक्छ । त्यसैले त डा. तारा नाथ शर्मा भन्नु हुन्छ “साहित्यिक कलाको विशिष्ट उत्पादन नै कविता हो” । उहाँ अझ अगाडी बढेर भन्नु हुन्छ “कुनै पनि गतिशील राष्ट्रको कविता निरन्तर अगाडी बढिरहनु पर्छ । यसरी अगाडी बढिरहने कविता राष्ट्रिय र अन्तरास्ट्रिय दुवै फाँटमा उन्मेशोंमुख हुन्छ । तन्नेरी कविता यस्तो उन्मेशोंमुख यात्रामा अग्रगामी, उत्साहबर्द्धक र प्रेरणादायी हुन्छ” ।
धेरैले भन्ने गर्छन् कविता बुझ्नै गाह्रो । नबुझेको कविता सुनेर दिक्क लागेर आँउछ । हो कसै कसैले यस्तै भन्ने पनि गर्छन् । तर सबै कविता क्लिष्ट हुदैनन् । सबै कविता नबुझिने पनि हुदैनन् । थोरै शब्दहरुले धेरै कुरा बोल्नु पर्ने भएको कारणले अलिक सन्दर्भ बुझ्न कठिन त होला । तर सबै कविता त्यस्ता हुदैन । त्यसो त यो पनि भनिन्छ कि जुन पाठकको स्तर हुन्छ त्यसरी नै कविताको पनि स्तर हुन्छ । कविले कविताको बारेमा प्रकास पारिरहनु पर्दैन आफैमा मर्मशील हुन्छ । कवितामा ठुलो शक्ति हुन्छ । जसमा एउटा गहन विचार, अन्तर्निहित भाबना र गतिलो संदेश दिने शक्ति राख्दछ | कविता बुझ्न समयचेत र सान्दर्भिकतालाई मनन त गर्ने पर्ने हुन्छ ।
हो बरिष्ठ कबि मोहन कोइरालाका कविता बुझ्न धेरै कठिन छ | उनको “फर्सीको जरा” कविता त मै हुँ भन्नेले पनि बुझेको छ जस्तो लाग्दैन | हो अरु पनि बरिष्ठ कवि छन् जसका कविता बुझ्न अलिक गाह्रो नै हुन्छ | हो त्यो पनि एक समय थियो होला | कविता अलि कठिन र क्लिष्ट लेखेर अनि कसैले नबुझिने लेख्दा अलिक ठुलो र विशिष्ट कवि भईन्छ भन्ने भ्रम पनि थियो कि ? तर जे लेख्दा पनि कविता हुन्छ भन्ने सोचाई एक प्रकारको परिकल्पना मात्र हो | कविता साश्वत हुनुपर्छ, क्षणिक हुनु हुदैन | बास्तबमा कविता सबैले लेख्न सक्ने बिषय पनि हो तर सबैले लेख्न नसक्ने कार्य पनि हो | कसैले भनेका छन् “कविता लेखन एउटा आविष्कार हो | कुनै कविता लेख्नु भनेको एउटा नभनिएको र पहिले कहीं नबनेको संरचना तयार गर्नु हो | यस अर्थमा कविता लेखन एक धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो | युद्ध, हिंसा, पीडा र यातनाको बिरोधी स्वर पनि कविता नै हो” |
अरु थुप्रै बरिष्ठ कविका कविताहरु धेरै सरल र सरस छन् । झन् छन्दोबद्ध कविता त संगीतको धुन झैं गित बनेर कानमा बज्छन् । माधब प्रसाद घिमिरे अनि कृष्ण प्रसाद पराजुली केही नाम हुन् जो छन्द कविताका हिमायती हुन् । सिद्धिचरण, केदारमान व्यथित, भूपि लगायत त्यस समयका थुप्रै कविका कविताहरु धेरै सरल र मिठा छन् । कबि मन्जुल, उषा शेरचन अनि दुर्गालालका कविता त पटक पटक सुन्न मन लाग्छन । भूपिका कविता र मुक्तक त धेरैले कण्ठस्त सुनाउन सक्छन् ।
अहिलेका चर्चित धेरै युवा कविहरुका कविता मिठा सरल, सरस र सशक्त छन् । बुझ्न सजिलो छ । सुन्दा अति मनोञ्जन प्रदान गर्दछ । अधिकांश कविहरुका कविताले जिबन्तता प्रदान गरेका छन र गरिरहने नै छन् । समय परिबर्तन भएको छ । छोटो, मिठो सरल र सरस कविता ले नै दर्शक र पाठकको मन खिच्न सक्छ । यो निर्बिबाद छ ।
कबि तुलसी दिवस भन्छन् “आजको कविता स्वरबद्ध, दृश्य र तरङ्ग पैदा गर्ने हुनुपर्दछ । अबको कविताले लिपिबद्ध मात्र नभएर ध्वनिमा उच्चारित बनेर मन्त्रोचारण झैं तरँग बनेर कानमा ठोकिन आईपुग्नु पर्छ” । त्यसैले आजको कविता सिडीमा, अल्बममा अनि ध्वनिमा अझ ससक्त र लोकप्रिय बनेका छन् । धेरै अघि नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघ, नेपालले त्यस समयका लोकप्रिय कविहरुको स्वरमा कविताको क्यासेट निकालेको थियो । धेरै लोकप्रिय पनि भयो । तर त्यसको निरन्तरता हुन् सकेन । आज थुप्रै साहित्यिक अनलाईन पत्र पत्रिकाले कवितालाई स्वरमा कविता भनेर प्रकाशन गर्ने गर्दछ । त्यसको धेरै चर्चा र परिचर्चा हुने पनि गर्दछ र प्रभावकारिता पनि हुने गर्छ ।
आजको संचार माध्यमको बिकसित प्रारूपले कम्प्युटरको माध्यम बाट संसारभरका श्रोतालाई एकै छिनमा समेट्न सक्दछ । एकैछिनमा त्यसको नतिजाको उत्पादक र प्रत्योपादक बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले कबि दिवसले भने झैं अबको कविता लिपिबद्ध मात्र होइन स्वर र धुन बनेर कानमा गुन्जिनु पर्छ ।
समाज बिकासको लागि नेपाली भाषा र साहित्यको कविता बिद्या एक सशक्त मध्यम हो । आज संसारभर छरिएर रहेका थुप्रै नेपाली लाई जोड्ने एक माध्यम नै आफ्नो साहित्य, कला, संस्कृति र भाषा नै हुन् । त्यो नै आफ्नो पहिचान हो । आफ्नो साहित्य र भाषाको बिकासको लागि धेरै शहरहरुमा बसोबास गरेका धेरै नेपालीहरुले कोठे कविता गोष्ठीको आयोजना गर्ने गरेको समाचार हामी सुन्दैछौं र देख्दै पनि छौं । प्रत्येक महिनामा आफ्नो समयानुकुल आयोजना गरिने यस्ता गोष्ठीले सामुदायिक सहयोग आदानप्रदान र सम्बन्ध प्रगाढ हुने कुरामा दुइ मत हुदैन ।